Kukunda PaGungwa Pacific: Chaiyo Chaicho Vhidhiyo Mutambo Nezve Naval Hondo ... | Linux Vakapindwa muropa
Nhau ndedzekuti Linux rutsigiro ichave ichiwanikwa munguva pfupi yemusoro uyu. Mutambo wevhidhiyo wauchada kana uchida ngarava, zvemauto zvehondo uye nehondo. Kubva pamifananidzo yatinoona, ruzivo rwemutambo uyu runotaridzika zvakanaka uye isu tinofara kuti mugadziri wayo Evil Twin Artworks achangobva kuzivisa paTwitter kuti pachave nerutsigiro rweLinux munguva pfupi, chimwe chinhu chatinogamuchira kubva kuLxA.
Isu tinotaura nezveyevhi yekurwa vhidhiyo mutambo Kukunda paGungwa Pacific, yakaiswa muhondo mugungwa panguva yeHondo Yenyika II umo maunokwanisa kudzora ngarava dzako, kubata nendege kubva kune vanotakura nendege, moto torpedoes kubva pakadzika nema submarines, kuraira mafirita ese, uye shandura iyo nhoroondo nezviito zvako. Ndozvinovimbiswa nemutambo wevhidhiyo uye kubva kune iyo data iri kusvika, mavhidhiyo nemifananidzo zvinoita kunge zviri kusangana nezvinotarisirwa ...
Epic mutambo we ngarava yehondo yehondo munguva chaiyo uko vatambi vanozove ivo vagadziri venyaya yavo voga nekushandura mafambiro eHondo Yenyika II. Sezvo isu tichidzidza, haingori chete nerutsigiro rweLinux uye mamwe mapuratifomu, asi zvakare ichaunza dzimwe dzinonakidza nhau senzira dzekutsvaga nekuparadza ngarava dzevavengi muPacific Ocean, ngarava uye manejimendi manejimendi, uye manejimendi kugoverwa kuburikidza neakakosha nhumbi dzezvitoro ., ronga zvakakomba kurova, mutyairi weI-400 anotakura ndege, kuvaka zvikwata, nezvimwe.
Vatsoropodzi vakapihwa zita reKukundwa paGungwa pamberi peiyi vaive vakanaka kwazvo, saka nekuda kweichi chitsva chakamirirwa kuburitswa hatitarisiri zvishoma pane izvo, uye zvichanyatso kuvandudza izvo zviripo uye zvakare kukunda kukunda. Uye isu tichava riini nemufaro wekutamba? Zvakanaka, hapana zuva chairo parizvino, asi isu chete tinoziva kuti ichave imwe nguva mu gore rino zvinoenderana neruzivo diki runouya kwatiri kubva kune vanogadzira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kukunda PaGungwa Pacific: chairo mutambo wevhidhiyo nezvehondo dzegungwa ...